Nhau - Mabhokisi ekurongedza anogadzirwa sei?
Nekukurumidza kukurumidza kwemaindasitiri emazuva ano uye nekuenderera mberi kwekuvandudzwa kwehupenyu hwevanhu, zvido zvevanhu mumabhokisi ekupakata zvicharamba zvichiwedzera. Nekudaro, vatengi ikozvino vanoisa kumberi kwakakwirira zvinodiwa kune mhando yemabhokisi ekupakisha. Saka zvinoda kushandisa matekinoroji matsva mukugadzirwa, uye nekuenderera mberi nekuvandudza otomatiki nhanho yeMidziyo. Chete kana uchichinjira kune idzva shanduko uye ukasangana nezvinodiwa zvevashandisi vakasiyana ndipo panogona kurongedza mabhokisi emakambani anovandudza kukwikwidza kwavo.
Iko kunofanirwa kuyedzwa nemusika kana iwe uchida kuziva kana chinhu chinogona kuva nekutengesa kwakanaka kana kwete. Kupakata kunotora chinzvimbo chakakosha kwazvo munguva yese yekutengesa. Iyo inotaurirana nevatengi nemufananidzo wayo wega wakasarudzika, ichivaita vanakidze muzvinhu pakutanga kuona. Sezvo hupfumi hwemusika huri kukura muChina, vatengi vazhinji vari kuramba vachifunga zvine musoro. Izvi hazvingowedzere kuoma kwekutengesa kwechigadzirwa, asi zvakare zvinoita kuti mabhokisi ekupakata dhizaini asangane nedambudziko risati ramboitika.
Nekuenderera mberi kwekusimudzira kwehupfumi hwemagariro, kusimba zvishoma nezvishoma kwemusika wemazuva ano wemaindasitiri kwave zvakare kwakatungamira mukuvandudza kwekurongedza. Unoda kugadzira zvigadzirwa zvako zvimire kubva muboka revanhu, iro bhokisi rekurongedza rave kuita kiyi yesarudzo. Vanhu vanoshandisa kurongedza mateko kuti vataure manzwiro avo, uye nekuvandudzwa kwemamiriro epanyama uye epamweya ekurarama, zvakanyanya kucherechedzwa kunopihwa kune chigadzirwa kurongedza.
1. Ratidza hukuru hwepakeji: iyo yekuratidzira kurongedza yezviri mukati inogona kuoneka kuburikidza neyekunze kurongedza, iyo iri kuramba ichiwedzera kufarirwa nevatengi. Kunyangwe izvi zvichigona kuwanikwa kuburikidza nekuvhurika kwemakadhibhokisi, vazhinji vevashambadziri vemakambani vari kusarudza kuzadzisa ichi chinangwa kuburikidza nemubatanidzwa wekurongedza-kupinza hwindo repurasitiki mune kadhibhodhi chimiro. Kadhibhodhi nepurasitiki zvichave nemubatanidzwa unoshanda mune ramangwana.
2. Zvinyorwa zvakagadzirwa Iko kunogadzirwa kunowanzo kugadzirwa ne embossing mapateni pane yakazara pepa pepa. Kana vanhu vachinhonga, vanoona kuti rinobata bata rakasiyana nekadhibhodhi rakaenzana kana rakatsetseka. Kunyangwe iyo yekupedzisira mhedzisiro yekushandisa yakatsetseka kana matte iri yakawanda, vatengi vazhinji vachiri kusarudza matte mhedzisiro inosanganiswa nezvinhu zvakagadzirwa.
Yakadhindwa Pepa Bhokisi
3.Kupenya uye kupenya. Mumabhokisi ekupakadzira, kuputira kwakagadzirwa nezvinhu zvinopenya uye kunopenya kwatanga kuoneka kuzadzisa chinangwa chekukwezva mboni dzemaziso. Yakakosha mhedzisiro inks, pendi uye simbi zvinhu zviri kujoina iyi maitiro. Vagadziri vanoedza kusiyanisa zvigadzirwa zvavo kuburikidza nehunyanzvi uhu, asi panguva imwechete vanoteerera kune mutengo. Naizvozvo, nzira yekuzadzisa ichi chitarisiko uye kusevha mutengo ndeye kushandisa esimbi inki kana gloss mukudhinda. Basa reparera mafuta. Mune ramangwana, isu tichaona mamwe anopenya mabhokisi ekushongedza pamusika.
4. Bhokisi rakasarudzika-rakaumbwa bhokisi: Makambani mazhinji uye mazhinji anoda akasiyana mapakeji ebhokisi maumbirwo, achida shanduko dzinotyora tsika pachinzvimbo chechimiro chakajairika. Shanduko nyowani munzvimbo ino iko kushandiswa kwejekiseni kuumbwa kwepurasitiki magumo emakesi.
Nekukurumidza kuvandudzwa kwemaindasitiri emazuva ano uye nekuenderera kuri kuvandudzwa kwehupenyu hwevanhu, zvido zvevanhu zvemabhokisi ekupakata zvicharamba zvichiwedzera.